Fitoviana amin'ny jiro LED. Mianara mifidy izay tsara indrindra hitsimbina | Fanavaozana maintso
Fitoviana tariby LED
Portillo Alemanina | | Mitsitsy angovo, Toekarena an-trano
Azo antoka fa efa naheno momba ny takamoa LED ianao sy ny fihenan'ny fihenan'ny herinaratra. Mihombo hatrany ny teknolojia ary mila mianatra mitsitsy isika na amin'ny fanjifana angovo na amin'ireo gazy vokarintsika amin'ny atmosfera amin'ny alàlan'ity angovo ity. Ara-dalàna raha somary diso hevitra isika amin'ny voalohany rehefa manapa-kevitra ny hanova ny jiro ao an-tranontsika ho an'ny LED isika. Samy ny Jiro satria ny ambany fanjifana dia tsy miteraka fitehirizana ary tsy maintsy fantarintsika tsara ny fitovian'ny jiro LED hanatsara ny fandaniana tsara.
Amin'ity lahatsoratra ity dia hanazava amin'ny an-tsipiriany ny fitovian'ny takamoa LED momba ny takamoa hafa izahay ary hanome torohevitra vitsivitsy anao izahay hahafahanao mitahiry bebe kokoa amin'ny volavolan-dalàna.
1 Ampifamadiho ny jiro taloha amin'ny LED
2 Ny fitoviana amin'ny jiro LED miaraka amin'ireo mahazatra
3 Fahombiazan'ny jiro
4 Lisitry ny fitoviana
Ampifamadiho ny jiro taloha amin'ny LED
Rehefa hitantsika ny faktioran-jiro mandritra ny volana maro lanin'ny mpanjifa indrindra dia atsipintsika eo an-dohantsika ny tanantsika. Ary eo amin'ny fanaovan-jiro ao an-trano ihany no tsy ahitantsika pinch lehibe. Miaraka amin'ny Amin'ny fanovana ny jiro ao an-trano dia hitahiry be isika. Marina fa, amin'ny voalohany, izy ireo dia mirona amin'ny fandaniana mihoatra ny vidin-jaza sy ambany. Saingy ao no misy ny fahasamihafana eo amin'ny kalitao.
Raha jiro jiro mahazatra mahazatra dia mandany ny ankamaroan'ny heriny amin'ny hafanana, Ny LED dia afaka miasa amin'ny maripana ambany. Miezaha hikasika jiro miasa ary ho hitanao ny hatsiakany, raha ny mahazatra kosa nandoro anao. Ilaina ny manova ny tontolon'ny jiro amin'ny trano raha te-hanatsara ny fanjifana angovo isika. Ny fividianana ny takamoa rehetra ananantsika avy ao an-trano mivantana mankany amin'ny LED dia mety ho lafo amin'ny voalohany (na dia Eto ianao dia manana tolotra hanamora izany). Satria fohy ny androm-piainan'ny takamoa mahazatra, dia tsotra fotsiny ianao azontsika atao ny miandry ny fananganana azy ireo ary hanova azy ireo tsirairay.
Ny jiro LED dia manana kalitao tsara kokoa ary mitahiry tahiry lehibe amin'ny fanjifana herinaratra. Tombony lehibe ho antsika izany satria afaka mampiasa an'izany amin'ny fitsitsiana angovo amin'ny zavatra hafa isika. Na izany aza, rehefa manova ny jiro isika dia mahita ny tenantsika miaraka amin'ny olana ateraky ny Watt. Tokony ho fantatsika hoe iza no fitovian'ny jiro LED amin'ny fanajana ny hafa.
Ny herinaratra avy amin'ny jiro iray mankany amin'ny iray hafa dia novaina ary ankehitriny dia tsy maintsy fantarintsika hoe iza no mitovy aminy ka ambany kokoa ny fihinanana azy. Tsy misy ilana azy ny manova jiro LED hitehirizana vola raha mividy azy amin'ny hery ambony noho izay ilaina isika.
Ny fitoviana amin'ny jiro LED miaraka amin'ireo mahazatra
Ny zavatra voalohany sy lehibe tokony ho fantatrao dia ny famoahana ireo jiro vaovao ireo dia tsy refesina amin'ny watts. Ity dia fepetra vaovao antsoina hoe Lumens na lumens. Ity fepetra ity dia manandrana milaza amintsika ny habetsaky ny jiro avoakan'ny jiro ho an'ny tanjona azo ampiharina. Arakaraky ny hamerenan'ny jirofo ny jiro no hanomezany antsika hazavana bebe kokoa. Io dia misy fiovana lehibe amin'ny herin'ny jirofo mahazatra mandritra ny androm-piainany.
Satria ny jiro LED dia mitaky herinaratra kely kokoa, farany dia mitaky angovo kely kokoa hanazava ny habaka mitovy. Izy ireo no takamoa mahomby indrindra sy ara-tontolo iainana misy ankehitriny. Inona koa, manana tombony amin'ny tsy fisian'ny singa mandoto amin'ny fanamboarana azy, toy ny merkiora, na fitaovana hafa misy poizina sy radioaktifa.
Ny tahiry dia novokarina noho izy tsy mila mamorona tetezana plasma na manafana ny merkiora toy ny amin'ny neon. Mihodina fotsiny eo io ary tsy mandany angovo tsy ilaina akory.
Ny fampitoviana ny takamoa dia tsy tokony hatao maivana. Na ny fahalalana ny rafitry ny fandrefesana ho an'ny watts aza dia zava-dehibe ny fananana referansa fa tsy mitovy ny haben'ny fandrefesana. Ny mpanamboatra tsirairay dia manana andian-toetra izay omeny ny vokatra ary tsy hitovy amin'ny habetsaky ny haben'ny famoahana hazavana izany. Ataovy ao an-tsaina izany tsy ny takamoa 40W mahazatra rehetra dia mamoaka mitovy habe na haben'ny hazavana.
Raha ny LED dia asehon'ny watts ihany ny fanjifana amin'ny asan'ny jirama, fa tsy ny habetsaky ny jiro avoakany.
Ny refy fandrefesana ny lumens dia mifandraika amin'ny habetsaky ny hazavana avoakan'ny jiro sy ny herinaratra lany, izay no refesina amin'ny watts. Ny masontsivana iray hafa izay raisina rehefa mametraka fitoviana amin'ny takamoa hafa dia ny fahazavana. Momba izany ny lumens isaky ny metatra toradroa navoakan'ny jiro voalaza. Raha ny mahazatra dia miovaova arakaraka ny hahavony nametrahana azy sy ny haben'ny faritra tianay hazavaina.
Miaraka amin'ny takamoa LED izay misy a 5W isika dia afaka mahatratra ny hazavana mitovy amin'ny jiro mahazatra manodidina ny 35-40 W. Noho izany, ny herinaratra ampiasaina ary, aorian'izany rehetra izany, ny vidiny vokarintsika dia hatramin'ny 85% ambany noho ny jiro mahazatra.
Lisitry ny fitoviana
Ity dia azo jerena tsara amin'ny tabilao iray izay angonina ny sanda manodidina ny karazana takamoa, ny heriny ary ny fahaizany manazava. Ny fitoviana dia azo hamarinina amin'ny ankamaroan'ny karazan-jiro, manomboka amin'ny tsy mazava, hatramin'ny halogen, amin'ny alàlan'ny sodium, sns. Ny jiro LED 7W dia mitovy amin'ny halogène 60W mahazatra.
Raha ampitombointsika amin'ny jiro rehetra ao an-trano io tahiry io ary amin'ny fotoana andehanan'izy ireo dia tena mahomby ny fitsitsiana. Ankoatr'izay, tsy mamokatra hafanana fanampiny (izay ankafizin'ny fahavaratra indrindra) izy ireo ary manana fiainana ilaina lavitra kokoa.
Eto izahay dia mamela anao ny latabatra miaraka amin'ny fitoviana rehetra manan-danja indrindra izay ahafahanao mampitaha ny haben'ny watts amin'ny jiro LED dia ampitahaina amin'ny hafa ary ny mifamadika amin'izany. Amin'izany fomba izany dia azonao atao ny mahazo azy raha ny fitazonana jiro tsara ao an-trano, arak'izay azo atao.
Manantena aho fa ity fampahalalana ity dia manampy anao hanana hevitra mazava momba an'io lohahevitra io.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Fanavaozana maintso » Mitsitsy angovo » Fitoviana tariby LED
Ing. Rigoberto Ibargüen Fleitas dia hoy izy:
Azafady, tiako ny hanazavanao amiko ny fomba fizotry ny famokarana angovo herinaratra amin'ny zavamaniry biolojika izay mampiasa ny sisa tavela amin'ny fambolena (fary) na hazo, ary ireo tombony sy fatiantoka mety hitranga amin'ny fampiasana azy.
Valiny tamin'i Ing. Rigoberto Ibargüen Fleitas
Inona no azonao atao amin'ny tany?
Tanàna maharitra sy fivezivezena